आजदेखि लकडाउन खुकुलो, हेर्नुहोस् के खुल्ने के नखुल्ने ? – live 60media
आजदेखि लकडाउन खुकुलो, हेर्नुहोस् के खुल्ने के नखुल्ने ?
काठमाडौ आजदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । निजी तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन सञ्चालनको बिहिबारबाट अनुमति दिएको छ । पसल, व्यवसाय, उद्दोग र कलकारखाना पनि खोल्न अनुमति दिएको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सिटको आधा संख्या मात्र राखेर सवारी सञ्चालन गर्न दिइनेछ । तर, जोर दिनमा जोर र बिजोर दिनमा बिजोर नम्बरको सवारीमात्र सञ्चालनको अनुमति छ । प्रदेशहरुको हकमा प्रदेश सरकारलाई निर्णयको अधिकार दिइएको छ । सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर पसल व्यवसाय खोल्न छुट दिइएको छ । ७८ दिनको लकडाउन पछि पसल व्यवसाय बिहिबारबाट खुल्ने भएका हुन् ।
उद्दोग कलकारखाना र पूर्वाधार निर्माणका कामको अनुमति दिने निर्णय भएको छ । योसँगै सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण शुरु हुनेछ । लामो दुरीको सवारी भने सञ्चालनको अनुमति दिइएको छैन । निजी सवारी पनि लामो दुरीमा सञ्चालनको अनुमति दिइएको छैन ।
यसैगरी, एसईई परीक्षा यस वर्ष नलिने निर्णय भएको छ । विद्यालयहरुले लिएको आन्तरिक परीक्षा मुल्यांकनलाई नै मान्यता दिइनेछ ।
के के खुल्ने ?
अस्पताललगायत अत्यावश्यक सेवा, कृषि कार्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आधा सिटमा सवारी सञ्चालन- जोर बिजोर प्रणाली, पसल व्यवसाय, उद्दोग तथा कलकारखाना, होटल
के के नखुल्ने ?
शैक्षिक संस्था, मनोरञ्जन स्थल, जीम हल, पौडी पोखरी, खेलस्थल, लामो दुरीमा सवारी
← एका बिहानै दुर्लव सेस नाग को दर्शन सँगै जेठ २९ गते बिहीबारको भाग्य रेखा राशिफल पढ्नुहोस, र भेटी स्वरूप १ शेयर गर्नुहोस
पार्टीको निर्देशनपछि पनि सरिताले भनिन्- म ब्याक हुन्नँ →